कोरियामा एक युवतिले ‘पिजा खान मन छ, ल्याइदिनुस’ भनेर कोडभाषामा ११२ मा फोन गरेपछि… – Eps Sathi
कोरियामा एक युवतिले ‘पिजा खान मन छ, ल्याइदिनुस’ भनेर कोडभाषामा ११२ मा फोन गरेपछि…
February 21, 2022 1911
सुवन, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियामा एउटा अचम्मको घटना घटेको छ। यहाँका एक प्रहरी अधिकृतले ११२ नम्मरमा अनौठो फोन कल प्राप्त गर्दछन। दक्षिण कोरियामा ११२ नम्मर सहयताका लागि प्रहरीमा गरिने आकश्मिक नम्मर हो। ११२ नम्मरमा एक युवतिले फोन गरी ‘मलाई बुलखोगी पिजा ल्याइदिनुस’ भनेर भन्दछिन। ति प्रहरी अधिकृतलाई युवतिको यो भनाई कुनै कोड भाषा भएको र उनि आपतमा रहेको आशंका गरि उनलाई उध्दार गर्न लाग्दछन।
प्रहरीलाई ति फोन गर्ने युवति घरायसी हिंसामा परेको भान हुन्छ। फेब्रुअरी १८ तारिख राति ९ बजेर २० मिनेटमा ख्यङ्गिदो प्रदेशको ख्यङ्गी नाम्बु प्रहरी एजेन्सीको ११२ जेनरल सेक्युरीटी सिचवेसन रुम नम्मर २१ मा ति युवतिले फोन गरेकी थिइन। ति युवतिले ह्वासङ शहरको दोङतान न्यू टाउन क्षेत्रबाट फोन गरेकी थिइन।
११२ मा फोन गर्ने ति युवति अलि अतालिएको जस्तो आवाज फोनमा सुनिन्छ। उनले आफ्नो ठेगाना समेत एकै सासमा छिटो छिटो भन्छिन। उनले ‘कृपया मलाई ठूलो बुलखोगी पिजा ल्याइदिनुस।’ भनेर फोनमा भन्दछिन। फोन रिसिभ गरिसकेपछि प्रहरी अधिकृत समेत चकित पर्दछन। प्रहरी अधिकृत किम जङ इले सुरुमा त ति युवतिलाई गलत नम्मर पो डाएल गरिन कि भन्ने पनि लाग्दछ। तर जव फोनमा बोल्दैगर्दा छेउबाट अर्को एक केटा मानिसको आवाज समेत मसिनो स्वरमा सुनेका हुन्छन तब उनलाई पक्कै पनि त्यहाँ केहि गडबड भएको आशंका हुन्छ।
प्रहरी अधिकृत किमले ति महिलालाई तुरुन्तै सहयोग आवश्यक परेको हुन सक्ने आशंका गर्दै पिजाको कुरा उनको कोड भाषा भएको हो भन्ने ठहर गर्दै ‘कोड जिरो’ अभियान सुरु गर्दछन। कोड जिरो भनेको हिंसामा परेको मानिसलाई तुरुन्तै उध्दारका लागि चालिने अभियान हो। फोन गर्ने युवतिको ठेगाना पत्ता लगाई त्यहाँ पुग्न प्रहरीलाई मात्रै ७ मिनेट लागेको थियो।
घटनास्थलमा प्रहरी पुगी हिंसामा परेकी ति युवतिलाई हिंसा गर्ने मानिसबाट छुटाई पुरुषलाई पक्राउ गरेको थियो। ति युवतिका श्रीमानले उनिमाथि हिंसा गरेका थिए। उनका श्रीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ख्यङ्गी नाम्बु ११२ अफिसका प्रमुख पार्क कि स्वङका अनुसार यहाँको प्रहरीले यस अघि पनि यस्तै प्रकृतिको घटनाबाट पिडितलाई उध्दार गरेको थियो। यस अघि पनि यस्तै घटनामा पिडकले ११२ मा फोन गरी ‘मलाई चाजाङम्यन खान मन छ कृपया ल्याइदिनुस’ भनेर कोड भाषामा भनेका थिए। प्रहरीले उनको यो कोड बुझेर तत्कालै उध्दार समेत गरेको थियो।
Prevरक्सी खुवाएर मातेको तालमा मलाई एमाले प्रवेस गराए….
Nextकोरियामा कामदारको औषतमा प्रतिमहिना ३२ लाख कमाई, हेरौं कस्ता कम्पनीमा सबैभन्दा बढि कमाई रहेछ?
कुमारी बैंकले १ अर्बभन्दा बढि कमायो, हेर्नुस् इपिएस र नेटवर्थ कति पुग्यो?
दुबइमा तापक्रम ५० डिग्री पुगेपछि यसरी गराइयो कृत्रिम बर्षा (भिडियो सहित)
जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाड कहिले हुँदैछ? जानिराखौं
सेप्टेम्बर १ बाट कोरियाले भिजा खुकुलो पार्दै, हेरौं कुन कुन देशलाई खुकुलो पार्दैछ